Home News Golaha Wasiirada Maamulka Jubbaland oo kulan xasaasi ah maanta ku yeeshay Magaalada...
Golaha Wasiirada Maamulka Jubbaland oo kulan xasaasi ah maanta ku yeeshay Magaalada Kismaayo
Ugu horayn waxaa golahu uu ka tacsiyeeyay geerida ku timid Nabadoon Dhaqane Qaasim Aamin oo lagu dilay Degmada Beledxaawo iyadoo Hay’adaha amaanka la faray in ay baaritaan deg deg ah ku sameeyaan sida uu dilku u dhacay lana soo qabto kuwii ka danbeeyay.
Wasaarada qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ayaa soo bandhigtay shirar kala duwan oo ay ku qabatay Magaalada Kismaayo iyo kulamo ay la yeelatay masuuliyiin kasocday hay’ado kala duwan oo caalami ah.
Wasaarada Caafimaadkuna waxaa ay soo bandhigtay in faafida xanuunka qaaxada uu dhibaato ku hayo meelaha qaar isla markana daawooyinka laga bixiyo xarumaha gaarka loo leeyahay aysan ahayn kuwo tayo ahaan wanaagsan iyadoo soo bandhigtay hanaan wax lagaga qabanayo dhibaatadaas.
Wasaarada howlaha guudna waxay ka warbixisay hanaanka dhul bixinta oo si dardar leh ku socda iyadoo sharciyaynta dhulalka iyo soo afjarista muranada dhulku ay meel wanaagsan marayaan.
Previous articleDoorashada KG oo dib loo dhigay mar kale iyo jadwal cusub oo al sameeyay (Akhriso)
Next articleCiidamada uu hogaaminayo Korneel Caarre oo la wareegay Deegaanka Ceel-Afweyne
Explosive targeting police kills two hyenas in Wajir county
Madaxweyne Trump oo u hanjabay Dowladda Turkiga